Etu esi ekwe nkwa na saiti gị ka edepụtara aha email | Martech Zone
Tuesday, February 19, 2008 Friday, December 12, 2014 Douglas Karr
Anyị na-enyocha otu n'ime saịtị ndị ahịa anyị taa. Ha ga-agagharị na ntinye email anyị n'oge na - adịghị anya - nke bụ ihe dị mma. Ana m guessing ha weebụsaịtị na-eleghị anya ugbua blacklisted… here's why…
Ha nwere ụdị kọntaktị na weebụsaịtị ha. Ọ dị mma nke ukwuu, ụyọkọ ubi iji zipu ozi nkeonwe gị niile ka ha debanye aha maka ozi email ha. Otú ọ dị, ileba anya nke ọma, ọ bụ ezie na ọ bụ ngwa ọrụ ha wepụtara maka ndị spamm iji jiri ya mee ihe.
<INPUT type=hidden value="onye ọ bụla@someone.com"aha =" sendto "/>
Rịba ama ubi zoro ezo ebe ị nwere ike itinye adreesị ozi-e! Dị ka ule, m wetara mpempe akwụkwọ ahụ, tinye adreesị email m na ya, ma tinye njikọ na mpaghara zoro ezo ọzọ. M pinye aka na nkeji mgbe emesịrị, enwere m ozi email SPAM na igbe mbata m!
Nke a bụ otu ndị spammers nwere ike isi nọgide na-ezipụ email na-enweghị nchegbu gbasara igbochi. Naanị ihe ha ga-eme bụ ịchọta ụdị ihe a ebe nrụọrụ weebụ gị na ha nwere ike ide usoro nke na-akpali ọtụtụ nde ozi ịntanetị site n'abalị. Getsnye na-egbochi? Ọ bụghị spammer… ụlọ ọrụ na-eme!
Specificdị a akọwapụtara dị na weebụsaịtị nke a ijeri azụmahịa dollar, ọ bụghị obere azụmahịa. Ma e nwere ọtụtụ puku ụdị ndị a na-enweghị nchebe n'ụdị ebe niile na net. Ihe na-eju anya ebe a bụ na ha mere ya na ibe ASP - ibe nwere ike ime ngwa ngwa nyocha adreesị email na sava ma tinye ha.
Ọ bụrụ na ị na-eche, n'ezie anyị agwala ha!
Tags: email ojiiFormdị Emailemail ụdị nsogbuụdị spam
Feb 19, 2008 n’elekere 11:19 nke abali
Onwe m, ana m enwe obi abụọ banyere onye ọ bụla enweghị adreesị ozi-e edepụtara na blọọgụ ha na naanị ụdị kọntaktị, mana ọ dị ka ọ bụ naanị ụzọ 100% ịme ya. Enwere m mmasị na adreesị ozi-e oyiyi nke ndị mmadụ nwere ike ịhụ mana ha ga-abanye na. Eleghị anya agbakwunye Flash ga-abụ ụzọ ọzọ. You bụ ụdị kọntaktị naanị nwa okorobịa?
Feb 19, 2008 n’elekere 11:35 nke abali
Emela obi abụọ - anyị na-anwa ịchekwa onwe anyị. Ebumnuche nke ịkpọtụrụ maka IS ka ndị mmadụ wee nwee ike ịkpọtụrụ anyị na-ahapụghị anyị oghe maka spambots.
Feb 19, 2008 na 12:49 PM
@Stephen Ikwuru eziokwu na ọtụtụ ndị mmemme na-ede spam bots bụ ndị umengwụ. Echere m, ị nwere ike ịkọwapụta nsonaazụ nke http://tinyurl.com/yuje9z ma nweta ọtụtụ narị puku adreesị na spam.
Nchedo kachasị mma ka ịkwụsị nkwupụta adreesị email, ma jiri a ụdị weebụ kama.
Feb 21, 2008 na 3:26 PM
Aghotara m ihe unu abuo na-ekwu. Maka m, ụdị kọntaktị dị ka nọmba 1-800 kama nọmba ekwentị na kaadị azụmaahịa. Ọ na-eche ụzọ oke ụlọ ọrụ / tiketi nkwado.
Feb 21, 2008 na 3:31 PM
Ekwenyere m na PDFs bụ ederede doro anya (ọbụlagodi Google nwere ike ịkpa ha) na email gị dị na mmalite gị, Doug.
Achọpụtara m na blọgụ gị na-atọ m ezigbo ụtọ, mana anaghị m aghọta etu esi arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na i dejupụta mpempe akwụkwọ a, olee otu spam bots si enweta adreesị email gị?
Ọ bụrụ na saịtị ahụ zoola ubi na adreesị email gị oge niile, mgbe ahụ ọ doro anya etu spam bots si enweta ha.
Mana mgbe ị na-ejuputa ya, ị gaghị akụfere ntinye, mgbe ahụ ubi ndị zoro ezo pụọ, nri? Ndi spam bot nwere ihe omume edere na ibe ahu nke na - ejide ihe i pinye ma obu ihe saiti ahu na etinye na ubi zoro ezo mgbe i na - eji ya
Aghọtaghị m. Biko ị nwere ike ịkọwa nke a karịa?
Ndien nso ke ẹkeme ndinam? Kedu otu esi etinye mpempe akwụkwọ na spam bots enweghị ike ime nke a kwa? Ọ bụ naanị na ịghara iji ubi zoro ezo maka adreesị email ma ọ bụ karịa ya?
Dịka onye ọbịa, ị nọghị n’ihe egwu ọ bụla. Okwu a bụ maka ndị tinyere ụdị a. Onye Spammer nwere ike 'highjack' ụdị ahụ ma zipu spam site na iji ya. Ọ bụ omume dị egwu nke ụlọ ọrụ ahụ tinyego na weebụsaịtị ha.
Otu ajụjụ… .ma ọ bụrụ na m ga-enwerịrị adreesị email m na ibe, gịnịzi bụ ụzọ kachasị mma iji mee ya? Ọ dị mma iji koodu agwa hexidecimal?
Ndị Spammers nwere usoro ihe eji egwu dị mgbagwoju anya nke na-enwe ike ịghọrọ adreesị ozi-e n'ọtụtụ ụzọ. M ga-eme n'eziokwu na ike gwụrụ m itinye adreesị email m na ibe weebụ ma, kama nke ahụ, tinye ụdị kọntaktị.